Ny fanoloran-tena ara-kolontsaina vaovao dia mampanan-karena ny tany mahafinaritra any Sisila
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Italia » Ny fanoloran-tena ara-kolontsaina vaovao dia mampanan-karena ny tany mahafinaritra any Sisila
Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Italia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • fampiasam-bola • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny valan-javaboary arkeolojika Selinunte
Ny valan-javaboaharin'i Selinunte Archaeological Park dia nisokatra iray volana monja taorian'ny haintrano izay nandrava ny kirihitra Mediteraneana sy ireo hazo tao amin'ny Acropolis tamin'ny 26 septambra.
Miaraka amin'ny fitsabahan'ny manam-pahaizana maika dia maika, ireo zavamaniry sarobidy izay ampahany tsy miankina amin'ny tontolo arkeolojika goavambe dia namboarina indray ary namboarina ireo faritra simba.
Herinandro taorian'ny nanokafana ny Museum Archaeological of Francavilla di Sicilia ary namporisihan'ny fanehoan-kevitra feno hafanam-pon'ireo mpitsidika marobe dia nanapa-kevitra ireo tompon'andraikitra fa hanitatra ny ora ho an'ny mpitsidika, manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 6 hariva.
Notokanana ny tranombakoka vaovao tany Tusa - ny Lapidarium an'i Alesa Arconidea, ilay tanàna Sisilianina-grika taloha nijoro teo. Ny Museum dia manamarika ny dingana ara-tantara an'ny tanàna taloha, hatramin'ny fotoana niorenany tamin'ny taonjato faha-5. BC hatramin'ny fandringanana azy tamin'ny alàlan'ny fisehoan-javatra tany amin'ny taonjato fahefatra. AD ary avy eo ny fanafihan'ny Arabo an'i Sisila.
Ny University of Catania dia nanao patanty fitaovana azo ampiasaina hanatsarana ny fitsidihana tranokala iray na faritra voaaro voajanahary, izay ahafahan'ny mpitantana mandinika ny fihetsika sy mandika ny safidin'ny mpitsidika amin'ny alàlan'ny fanolorana atiny fanampiny amin'ny zava-misy nampitomboina.
Ny faritra ivelany an'ny Villa Romana del Casale ao Piazza Armerina dia havaozina tanteraka ary hatsaraina noho ny famatsiam-bola POC, (European Council Council). Manokana indrindra, hazavana vaovao havaozina amin'ny masoandro no hapetraka ho an'ny fitsidihana amin'ny alina, toeram-piantsonana azo aleha tsy misy fandrika sy trano fidiovana vaovao, satria ny fahavaratra lasa dia nisy anjaran'ny besinimaro nandritry ny hariva sy ny alina.
Ny faritra maintso, ny faritra varotra ary ny rafitra fanariana rano koa havaozina. Noho ny Covid-19, ny andiany faha-12 an'ny Fetiben'i Bellini, izay nifanindry tamin'ny faha-219 taonan'ny nahaterahan'ilay mpitendry mozika, dia haverina indray raha vantany vao azo antoka ny hanaovana azy.